Alaabooyinka AUKEY ee | Androidsis
Alaabooyinka AUKEY ee
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Aaladaha Android, Qalabka kale
Maanta waxaan kaala hadlaynaa barnaamijka 'Androidsis' ee ku saabsan saddex alaabood aad u kala duwan oo ay ka siman yihiin, isla soo -saare, AUKEY. Shirkad isku dayaysa inay ka hesho booskeeda dhowr qaybood oo ka mid ah aagga farsamada oo maamusha inay ka dhex muuqato dhowr ka mid ah.
Markan waxaan eegeynaa saddex ka mid ah kuwa aan ka heli karno buugyaraha ballaaran si aan kuugu sheegno wixii aan helnay ka dib markii aan awoodnay inaan isku dayno. The Aaladaha dhagaha ee AUKEY N7, LS02 smartwatch iyo laambad leh xakamaynta taabashada LT-T8.
0.1 Saddex badeecadood oo AUKEY ah oo loogu talagalay saddex baahi oo kala duwan
1 Taleefoonnada gacanta ee AUKEY N7
1.1 Tilmaamaha Taleefoonka N7
2.1 Muxuu LS02 na siiyaa?
3 AUKEY LT-T8 Siraad
Saddex badeecadood oo AUKEY ah oo loogu talagalay saddex baahi oo kala duwan
Waxaa jira ikhtiyaarro aan la tirin karin oo tiknoolajiyadu na siiso, iyo baahiyo dhowr ah oo aan dabooli karno iyada oo mahadsan. Meelo kala duwan, teknolojiyaddu waxay maamushaa inay xalliso dhibaato, naga caawiso inaan xallino ama ugu yaraan nolosha u fududayno aaladaha iyo agabyada na dhammaystira.
Qalabka guryaha taas oo ka soo baxda fikradaha aasaasiga ah sida laambad. Sameecadaha dhagaha ee ka taga fiilooyinka. Ama daawado oo ay weheliyaan taleefannada casriga ah ayaa ka dhigaya tandem aad u dhammaystiran oo waxtar leh oo u noqda "lama huraan" isticmaaleyaal badan.
Taleefoonnada gacanta ee AUKEY N7
Waxaa jira dhowr cutub oo Dhegaha dhegaha AUKEY in aan awoodnay inaan ku tijaabinno Androidsis. Dhammaantood way u hoggaansamaan ugu yaraan tayada agabka iyo naqshadeynta u qalma shirkad leh asal gaar ah. Adigoon iloobin waqti kasta inaad bixiso waayo -aragnimo cod oo mar walba qancisa si fiican u helay dadka isticmaala.
AUKEY N7s ayaa leh qaabka xididka, oo sidoo kale loo yaqaan Dhegta, oo macnaheedu yahay in dhegta dhegta ay ku jirto gudaha dhegta. Lagu sameeyay alaab caag ah madow, jilicsan ee taabashada oo leh darafyo wareegsan taas waxay ku habboon yihiin si qumman anatomy noo ah.
Waxay leeyihiin classics gogosha, kuwaas oo aan ka helno saddex cabbir oo la heli karo, kuwaas oo u adeega marka marka dhegta la geliyo, saamaynta faaruqinta la soo saaro oo heerka maqalka si weyn loo hagaajiyo. Dhab ahaantii way ka dhawaajiyaan awood ku filan si aysan muhiim u ahayn in lagu haysto mugga ugu badan ee la heli karo. Hadda waad iibsan kartaa AUKEY-N7 bogga rasmiga ah ee qiimaha ugu fiican.
Tilmaamaha Taleefoonka N7
Mid ka mid ah astaamaha ugu caansan dhagaha dhagaha ayaa ah joojinta dhawaaqa. Gaar ahaan, N7 -yada ayaa lagu qalabeeyay hybrid technology joojinta buuqa firfircoon. Mikrafoonadeedu waxay maareeyaan inay nidaamiyaan qaylada dibadda iyo gudaha iyagoo isku daraya a dhimista ilaa 35 dB. Kuwa ay 8mm wadayaasha kaarboon firfircoon waxay bixiyaan bass qoto dheer oo soo jiita.
El qaabka daahfurnaanta Waxaa habboon in la awoodo in la qabto wada sheekeysi, ama la dhegeysto waxa nagu hareereysan daqiiqad gaar ah haddii aad u baahan tahay inaad ka saarto madaxa dhegaha ama aad hoos u dhigto mugga. Makarafoonnada laftoodu waxay codka u gudbiyaan dhegaha -dhegaha si aan u maqalno cod dheer oo cad haddii ay nala hadlaan.
Banaanka muuqaalka dhegaha ee AUKEY N7 taabashada taabashada. Waad ku mahadsan tahay hal ama dhowr furayaal, taas oo ku xidhan taleefoonnada dhagaha, waan cxakamee dib -u -ciyaarista muusikada. Ama kuaqbalo, dhigto ama diido wicitaanada. Wicitaannada taleefanka oo si qurux badan u qulqulaya maadaama labada dhinacba si fiican isu maqlayaan oo aan kala go 'lahayn.
Faahfaahin kale oo muhiim ah oo N7 -yada lagu qalabeeyay ayaa ah iska caabinta biyaha ama boorka. Waayo, kanu waxay leedahay Shahaadada IPX5 kaas oo dammaanad qaadaya sirtiisa. Roob, ama daadinta biyaha dhib ma noqon doonto. Waxaan u bixi karnaa orodka maalin roobaadka annaga oo aan ka walwalin inay waxyeello soo gaarto. Haddii ay yihiin dhagaha dhagaha ee aad raadinaysay, iibso N7 -kaaga hadda bogga rasmiga ah
Markaan go'aansano saacadda caqliga badan waxaan had iyo jeer tixgelineynaa dhinacyo naga dhigi kara inaan go'aan ka gaarno hal ama nooc kale. Qiimaha, faa'iidooyinka ay bixiso iyo naqshadeynta ayaa soo jiidasho leh. Waxaana xaqiijin karnaa, annaga oo aan ka baqaynin inaan khalad sameyno, in LS02 si fiican buu isaga difaacaa saddexdaa dhisme.
Sida for naqshadeynta, LS02 oo ka socda AUKEY waa saacad kuwa aan doonayn inay soo jiitaan dareenka. Iyada oo leh cabbir "caadi ah", ma laha qaabab ama midabyo qurxoon, laakiin tani ma aha mid khilaafsan naqshad fiican oo xarrago leh. Smartwatch oo leh a chassis biraha leh qaab afar gees leh midab madow oo cawlan leh oo ku habboon 1 shaashad inji ah.
Muxuu LS02 na siiyaa?
Laga bilaabo shaashaddaada, a Gudiga TFT leh diagonal of 1,4 inches iyo leh 320 x 320 dpi qaraar, in ka badan ku filan cabbirkan. Waxaa si fiican loo arkaa xitaa duruufaha cadaynta dibedda. Sidoo kale waxay leedahay dejimaha heerka dhalaalka waxaana dooran karnaa ilaa 4 nooc oo iftiin ah. Wax lagu seegay aalado kale oo badan. Waad awoodaa iibso AUKEY LS02 bogga rasmiga ah wax ka yar waxaad filayso.
Saaxiibka ku habboon inuu sameeyo isboortiga aad ugu jeceshahay, xakameynta dib -u -ciyaarista muusikada gacantaada. Mid ka mid ah faahfaahinta muhiimka ah ayaa ah AUKEY LS02 runti miisaan yar, ma ogaan doontid inaad xiran tahay. Waan helnay ilaa 12 qaabab isboorti inaad la socon karto si aad ula socotid kalooriyadaada la cunay ama kiiloomitirkii hore. Yeelo hadafyo iyo horumar oo gaarto caqabado.
Uma baahnid inaad ka walwasho saacaddaada oo ay waxyeelleeyeen dhidid ama biyo daadanaya. AUKEY LS02 ayaa sidoo kale leh Shahaadada IP68 iska caabinta boodhka iyo biyaha. Waxay celisaa heerkulka u dhexeeya -20º iyo 45º.
Mid ka mid ah dhinacyada adeegsadayaashu aad u qiimeeyaan, ayaa ah nolosha batteriga, waxay sidoo kale kor u qaadeysaa. AUKEY LS02 waxay bixisaa madaxbannaanida ilaa 20 maalmood oo la isticmaalo. Waxaad gabi ahaanba iloobi doontaa meeshii aad uga tagtay xeedho -wade smartwatch. Shaki la'aan, sababo badan awgood, AUKEY LS02 waa smartwatch in la tixgeliyo, iyo hadda waad iibsan kartaa boggeeda rasmiga ah wax ka yar € 50.
AUKEY LT-T8 Siraad
Halkan waxaan si buuxda u galnaa alaabta ka mid ah gurigeena taas oo tiknoolajiyaddu isku beddeshay. Laambad waa agabka lagama maarmaanka ah, wax aan ka heli karno guri kasta. AUKEY waxay ku dhejisaa fikradda asaasiga ah iyadoo hagaajinaysa.
Waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso sida laambadda loo hagaajin karo, laga yaabee inaad ka dhigto mid horumar leh. Laambadda AUKEY LT-T8 Waxay leedahay dhowr hab oo adeegsi. Kala duwan fursadaha wakhtiyo kala duwan oo leh hal qalab oo, marka lagu daro, uma baahnaan doonno in lagu xiro hadda mahadsanid xaqiiqda ah inay leedahay baytari u gaar ah. Qalab loogu talagalay gurigaaga oo aad awoodid ku iibso qiimaha ugu fiican bogga rasmiga ah.
Waan dooran karnaa ilaa saddex nooc oo qaliin ah kala duwan iyadoo ku xiran meesha, waqtiga maalintii, ama waqtiga aan doorano inaan isticmaalno. Iftiin jilicsan oo loogu talagalay miis -jiifka hurdada. A iftiin xoog badan loogu talagalay aperitif fiidkii beerta. Ama mid iftiin midab leh casho xamaasad leh asxaabta taas oo iftiinka wuxuu u beddelayaa midabka si habsami leh.
Waxay leedahay a xakamaynta taabashada dusheeda aad u raaxo badan in la isticmaalo. Laba -riixid ayaa daaran ama damiya. Iyo saxaafad dheer waxaan ku hagaajin karnaa midabka uu muujinayo xilligaas.
Ma aha hal -abuurkii kunka sano mana aha mid wax ka beddeli doona nolosheena. Laakiin way soo baxdaa alaab qurxin ah sidoo kale waxtar leh. Marka la eego qiimaheeda, waxaan u tixgelin karnaa daaweyn la awoodi karo si loogu daro taabashada midabka gurigayaga. Miyaad u raadineysay wax sidaas oo kale ah gurigaaga? Soo qaado laambadda LT-T8 qiimaha ugu fiican boggeeda rasmiga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Alaabooyinka AUKEY ee
5 -ta barnaamij ee keyboard -ka ugu fiican ee lagu beddelo xarafka Android
Ciyaaraha mootada 5 ee ugu fiican Android